သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို သူမမွေးနေ့မှာ ပရိတ်သတ်အတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ မေလသံစဉ် - Media Update News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ မေလသံစဉ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့က မေလ (၂၃) ရက်နေ့လေးကတော့
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မေလသံစဉ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။ မေလသံစဉ်ကတော့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး
မေလသံစဉ်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မေလရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မေလသံစဉ်ကတော့ ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်
သူ့ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးအဖြစ် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်. .။ သီချင်းလေးရဲ့ နာမည်ကိုက “ Happy Birthday ” လို့ အမည်ရပြီး တကယ်ကို နားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့
သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ ။ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက မေလရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မေလရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်သီချင်းလေးကို ပြန်လည် မျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် ။
ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်. ။
သီခ်င္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ကို သူမေမြးေန႔မွာ ပရိတ္သတ္အတြက္လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တဲ့ ေမလသံစဥ္
ခ်စ္လွစြာေသာ ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမလသံစဥ္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္မေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ မေန႔က ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေမလသံစဥ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္..။
ေမလသံစဥ္ကေတာ့ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ေမလသံစဥ္ကို ခ်စ္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေမလရဲ႕ေမြးေန႔အတြက္ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးေနခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ေမလသံစဥ္ကေတာ့ ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြအတြက္ သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေလးအျဖစ္
သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္. .။ သီခ်င္းေလးရဲ႕ နာမည္ကိုက “ Happy Birthday ” လို႔ အမည္ရၿပီး တကယ္ကို နားေထာင္လို႔ ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါပဲ ။ ပရိသတ္ႀကီးေရ ပရိသတ္ႀကီးေတြထဲက ေမလရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေမလရဲ႕ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္သီခ်င္းေလးကို ျပန္လည္
မွ်ေဝေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။ ဖတ္ရႉ႔ေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္. ။
Previous Article ဂန်ဂူးဘိုင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့ ဂန်ဂူးဘိုင်အတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသလာတဲ့ ဒီး
Next Article နွယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့ အချစ်မေတ္တာလုံလုံလောက်လောက်မရခဲ့လို့ ပိုင့် ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုလာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်